Iingcamango kunye neMigqaliselo ebanjelwe kwi-Archimedes
U-Archimedes wayengumbalo kunye nomqambi waseGrisi lasendulo. Ebhekwa njengomnye wabafundi abakhulu beemathematika kwimbali , ungumzali we-calculus kunye ne-physics ye-physics. Nazi ezinye zeengcamango kunye neengcebo eziye zanikwa kuye. Nangona kungabikho usuku oluchanekileyo lokuzalwa kwakhe nokufa kwakhe, wazalwa malunga ne-290 no-280 BC waza wafa ngexesha eliphakathi kwe-212 okanye 211 BC e-Syracuse, eSicily.
U-Archimedes wabhala ngolu hlobo lwakhe "KwiiBhodi eziDlangayo" into eyenziwe ngamanzi afuthayo afana nesisindo samanzi. I-anecdote eyaziwayo yendlela eya kufika ngayo le nto yaqalwa xa yacelwa ukuba yenze ukuba isithsaba igolide ecocekileyo okanye iqulethe isilivere. Ngethuba ebhaptiza wafika emgangathweni wokufuduka ngesisindo waza wagijima ehamba ngezitrato, wamemeza esithi "Eureka (ndiyifumene)!" Isithsaba ngesiliva sasingaphantsi kwesinye segolide ecocekileyo, Ukulinganisa amanzi aphephekileyo kuya kuvumela ukubalwa kobunzima besithsaba, kubonisa ukuba okanye kwakungekho igolide ecocekileyo.
I-Archimedes igxuma, okanye iqhuma ipompo, ngumshini onokuphakamisa amanzi ukusuka kwinqanaba ukuya phezulu. Ku luncedo kwiinkqubo zokunkcenkceshela, iinkqubo zamanzi, iindlela zokuthuthwa kwamanzi kunye nokupompoza amanzi ngaphandle kwinqanaba lomkhumbi. Ingumfanekiso ojonge umbhobho ngaphakathi kwipayipi kwaye kufuneka iguqulwe, edlalwa ngokuyifaka kwi-windmill okanye ngokuyijika ngesandla okanye ngenkunzi.
Iinqwelo zomoya zaseHolland ziyimzekelo yokusebenzisa i-Archimedes isikhewu sokukhupha amanzi kwindawo eziphantsi. U-Archimedes akazukufumanisa le ntetho kuba kukho ubungqina obunokuba khona iminyaka emininzi ngaphambi kobomi bakhe. Kusenokwenzeka ukuba wayezibonile eYiputa waza kamva wabaxhaphaza eGrisi.
IMash Machines kunye neRat Ray
U-Archimedes naye wakha iindidi zokulwa, i-catapult kunye ne-trebuchet yemishini yemfazwe yokusetyenziswa kwimikhosi ejikeleze iSirrase. Umbhali uLucian wabhala kwinkulungwane yesibini ye-AD ukuba u-Archimedes wasebenzisa isicaciso sokugxotha ukushisa okubandakanyeka izibuko ezisebenza njengombonakaliso wempendulo njengendlela yokubeka iinqanawa ezihlasela umlilo. Abaninzi abahlalutyo bamhlanje bazama ukubonisa oku kunokwenzeka, kodwa baye bafumana iziphumo ezidibeneyo. Ngokudabukisayo, wabulawa ngexesha lokuvinjelwa kweSirakuse.
Iimigaqo ze-Lever nePulleys
U-Archimedes ucatshulwa esithi, "Ndiphe indawo yokuma kwaye ndiya kuhambisa umhlaba." Wachaza imigaqo yeengcambu ekusebenziseni kwakhe " Kwi-Equilibrium yeePlani ." Wakhele i-block-and-tackle i-pulley iisetyenziselwa ukulayisha nokulayilula iinqanawa.
I-Planetariyam okanye i-Orrery
U-Archimedes waze wakha izixhobo ezibonisa ukuhamba kwelanga nenyanga kwizulu. Kuya kufuna iimpahla ezihlukeneyo. Ezi zixhobo zafunyanwa nguGenerali Marcus Claudius Marcellus njengenxalenye yokuqhawulwa kwakhe kwi-Syracuse.
U-Archimedes utyalwa ngokuklama i-odometer engakwazi ukulinganisa umgama. Yasebenzisa isondo leenqwelo kunye neengqayi ukuphonsa ilitye eliqhelekileyo ngekhilomitha lamaRoma ukuya kwibhokisi yokubala.
UJohn Loudon McAdam Utshintshile iiNdlela ngonaphakade
Imbali ye Modem
AmaGladiator aseRoma kunye neGladiator Movie